Uyibopha njani iBandana - Eyabantu Iintetho
Uyibopha njani iBandana
Uyabona abantu abanxibe iibhanana ngalo lonke ixesha, kwaye babonakala bebahle. Kodwa ukuba awuqinisekanga malunga nokunxiba enye ngokwakho, kulula kakhulu ukuba ufunde indlela yokubopha enye. Kukho iindlela ezininzi zokubopha enye, ke jonga eyona nto isebenzela wena kunye neemfuno zesitayile sakho.
Amanyathelo asisiseko okubopha iBandana
Ukubopha i-bandana kwimpahla esisiseko entlokweni, landela la manyathelo:
Okokuqala, qiniseka ukuba i-bandana ilungele intloko ngokuyibeka etafileni kwaye uyisonge ngokudibeneyo ukwenza unxantathu. Smooth i-crease ukuze ichazwe.
Bamba isiphelo ngasinye sonxantathu ezandleni zozibini, uqiniseke ukuba asityibiliki (kulapho ikunceda khona loo nto).
Beka i-bandana apho ufuna khona entlokweni yakho. Indawo efanelekileyo iphakathi kwebunzi lakho, kodwa unokukhetha ukuyinxiba phezulu okanye ezantsi, kuxhomekeke kutyekelo lwakho.
Bopha iziphelo ezibini ze-bandana ngasemva kwentloko yakho kube kanye, ngokuqinileyo (kodwa ungangqineki kangako kangangokuba uyakhumbula - khumbula, intloko yakho iya kudumba kubushushu). Iiphelo ziya kuba zijinga, kulungile, kuba uza kubabopha kwakhona ngomzuzu.
Qiniseka ukuba umphezulu kanxantathu ulala ngasemva kwentloko yakho- inokuba phezulu okanye iphantsi kancinci, kodwa ufuna ukuba nesigqubuthelo sakho sonke sigutyungelwe. Ngoku, ungayifaka loo nxantathu phezulu phantsi kweziphelo eziboshwe ngasemva kwentloko yakho, okanye uyibeke phakathi kwabo. Xa wanelisekile yindawo yayo, qhina iiphelo kwakhona, ukhusele umphezulu kanxantathu, yiyo loo nto ibhendi iphela.
Iifutshane zamadoda eziMibala
Le ndlela yokunxiba i-bandana ikwabonelela ngokhuseleko lwentloko kuye nakubani na onesifoukulahleka kweenwele.
Ukubopha i-Bandana Headband
Kumfana oneenwele ezinde afuna ukuzigcina ebusweni, okanye xa usebenza, ubopha i-bandanaiqhiya(ezinje ngokuba ngabadlali bebhola ekhatywayo abaqeqeshiweyo) kunokuba luncedo.
Umzalwana ohlekisayo ucaphula kudade
Qala njengokuba ungentla, ugoba i-bandana unxantathu.
Qhubeka uyisonge ngokulinganayo, de ube nebhanti ende enephedi.
Beka ibhendi ngaphezulu kwentloko yakho ngencam yonxantathu ngokuchasene neenwele zakho ukuthintela ukuba iphume.
Bopha iziphelo kwiqhina kwindawo yentamo.
Ukugcina iinwele zakho zingabanjwa kwiqhina, thintela intloko yakho phambili ukuze iinwele zakho zingabikho entanyeni yakho kwaye emva koko ubophe ngokufanelekileyo.
Lungisa njengoko kufanelekile ukuze ube nokusebenziseka kunye nentuthuzelo.
Ukuba ufuna i-bandana yakho ibe nayo jonga ihip-hop , ungashiya iiphelo zebandana yakho ngaphambili ngaphambili ebunzi emva kokubopha.
Kukho amadoda athile athanda ukubonakala kwe-bandana enxitywe entanyeni, kufana nesikhafu . Oku kwaziwa ngokuba yi-cowboy bandana. Ukubopha enye ukunxiba entanyeni yakho, landela nje la manyathelo:
Gcwalisa i-bandana kunxantathu ngokuyigoqa ngesiqingatha ukuze iikona zayo ezimbini ezichaseneyo zidibane.
Thatha iziphelo ezibini ezichaseneyo kwelona cala lide loncantathu kwaye ubeke elona cala lide entanyeni yakho ngencam ekhombe ezantsi.
Tsala iziphelo ezichaseneyo kunye kwaye uzibophelele kwiqhina emva kwentamo yakho.
Kule ndlela, qiniseka ukuba ayibotshwanga kakhulu. Uya kufuna ukuba i-bandana ilingane kakuhle entanyeni yakho kwaye ube ne-intshi yokubeka isithuba phakathi kwayo nentamo yakho.
Isixhobo sokupholisa kunye nesonwabisayo
Iibhanana zi istayile esincedisayo kwaye usebenze ngenjongo efanelekileyo ngokunjalo. Sebenzisa i-bandana ukugcina upholile kwaye ubile ukubila phantsi kweemeko ezishushu kwaye wongeze ubumnandi kuyo nayiphi na into oyinxibileyo. Zama zonke iinketho kwaye ubone ukuba ukhetha ntoni.
I-Inshorensi Yempilo Oonodoli Ne Zinto Izilwanyana Ukungathembeki Ukunyamekelwa Kwabantwana Ukugcina Mali
indlela yokwenza ii-couchs eziqinileyo kwakhona
Ngaba kukhuselekile ukuxuba iviniga kunye nesepha yesidlo sakusasa
singenza ntoni ukunqanda ungcoliseko
iposi ivulekile ikrisimesi
Utywina njani ucango lweglasi olutyibilikayo